Herisetra Nahafaty Olona 49 Tao Amin’ny Fonja Meksikana Be Loatra ny Gadra Ary Vitsy Loatra Ny Mpiambina · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra J. Tadeo, Elizabeth Rivera Nandika (en) i Kitty Garden, Andriamifidisoa Zo
Voadika ny 18 Febroary 2016 16:45 GMT
Manakaiky ny 50 ny olona maty tao amin'ny fonja hipoka gadra ao Topo Chico any Meksika tamin'ny 11 febroary 2016. Pikantsary: YouTube / World News
Farafahakeliny 49 ny isan'ny mpiara-migadra maty nandritra ny ady iray (na rotaka, araka ny lazain'ny tatitra sasantsasany) tao amin'ny fonja fanarenan'i Topo Chico ao Monterrey, Meksika, tamin'ny herinandro teo, manaporofo indray ny harefon'ny fonja ao amin'ny firenena.
Topo Chico dia natsangana handray voafonja 2600, saingy manodidina ny 3800 ny isan'ny lehilahy tao raha vaky ny herisetra tamin'ny 11 Febroary, araka ny nolazain'ny gazety La Jornada. Ankoatra ny fahamaroan'ny voafonja be loatra dia malaza ho tsy ampy isa ihany koa ny mpiambina ao Topo Chico, izay maro amin'ireto farany no tafiditra amin'ny raharahan-kolikoly, hoy ny La Jornada.
Nilaza ny gazety ao an-toerana Diario del Pacífico fa tsy zava-baovao izany toe-draharaha izany. Tamin'ny jolay lasa teo dia notaterina fa farafahakeliny 40 isanjaton'ny fonjam-panjakana no be mpilafika loatra, araka ny famotopotorana nataon'ny governora voafidin'i Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Maro amin'ireo voafonja ireo, ambonin'izany, no nomelohin'ny fitsarana federaly. Ao amin'ny fonja telo misy ao Nuevo León (Apodaca, Topo Chico, ary Cadereyta), dia voafonja 1600 amin'ny 8120 no voalaza ho migadra eo ambany fahefana federaly.
Ao Topo Chico, dia ampiraisina toerana amin'ny ankapobeny ireo nanitsakitsaka ny lalàna tamin'ny fomba maherisetra sy tsy nanao herisetra. Hita ao anatin'ireo voafonja ny mpikamban'ny tambajotran-drongony Los Zetas, izay efa voaheloka ho nanao famonoan'olona maro, fakana an-keriny olona maro, fanondranana rongony ankoatra ny heloka hafa tsy voatanisa. Omen'ny rafi-pitsarana ao Meksika vahana ny “fitazonana ho fisorohana,” izay mamela ny ahiahiana hofonjaina mandritra ny fotoana itsarana azy izay midika fa tsy izay voafonja rehetra ao Topo Chico no voaheloka.
Tamin'ny herintaona, voafidy ho governoran'ny fanjakana Nuevo León, kandidà governora mahaleotena voafidy voalohany tao Meksika i Jaime “El Bronco” Rodríguez. Raha naneho hevitra tamin'ny vono olona tao Topo Chico izay tamin'ny herinandro, dia nitsipaka ny filazana fa misy voafonja sasantsasany nitady hitsoaka, ary nilaza ihany koa izy fa tsy nisy fitaovam-piadiana mipoaka tafiditra tamin'ity raharaha ity. Taty aoriana izy nanao fanambarana mifanohitra amin'izay fanamarihana izay.
Tsy nahagaga raha nahazo ny fifantohan'ny mpiserasera aterineto tao Meksika ity raharaha namoizana ain'olona ity, izay niresaka ny tsy fahombiazan'ny rafitry ny fonja ao amin'ny firenena :
Voina efa nateraky ny antoko nitondra rehetra i #TopoChico. Efa namela malalaka ny kolikoly sy ny tsy fisaziana an-taonany maro ry zareo.
Nandresy lahatra i E Páramo mpisera Twitter fa mendrika ny hisaonana tahaka ireo mpianatra nanjavona tao Ayotzinapa ihany koa ireo voafonja maty ireo:
Tsy latsa-danja ary tsy mihoatra noho ireo 43 tao Ayotzinapa ireo 49 tao #TopoChico ireo. #PresumptionOfInnocence
Namoaka ny vokatry ny famotorana ara-tsiantifika, natao tamin'ny fampiasana ireo porofo azon-dry zareo nojerena tamin'ny raharaha Ayotzinapa ny vondrona mpandala ny zon'olombelona Ekipa mpanao fandidiam-paty sy Anthropolojia avy any Arzantina.
Ny fanadihadiana ireo porofo biôlôjika sy tsy biôlôjika nalaina avy amin'ny fanarim-pakon'i Cocula nataon'ny sampam-pahalalàna maro, sy ny fanangonana ireo fampahafantarana fanampiny, dia tsy manohana ny petra-kevitra fa nisy afo naharitra tamin'ny marainan'ny 27 Septambra 2014 ahafahana milaza fa nisy ny fandoroana ireo mpianatra nanjavona miisa 43.
Ny zavatra hitan'ny vondrona dia mifanohitra amin'ny “marina ara-tantara” nolazain'ny manampahefana meksikana, izay milaza fa nalain'ny mpiasam-panjakana an-keriny sy novonoiny ireo mpianatra, dia avy eo nodorany tamin'ny alalan'ny afo goavana tao amin'ny fanariam-pakon'i Cocula ireo mpianatra ireo. Vao maika namely ny fitokisana ny rafi-pitsarana meksikana izany tatitra izany, raha nampiantrano ny Papa Fransoà ny firenena ary miezaka dia miezaka ny politisiana hifantoka amin'ny lohahevitra hafa, “mamafa ho ao ambany tsihy” itony raharaha manahirana itony.
Lohatenin'ny sary: Manadio trano.
Soratra amin'ny sary: Tongasoa!
Tongasoa eto Meksika, @Pontifex_es!
Sariitatra avy amin'i @_JOTAEME. Maro hafa ao amin'ny https://t.co/4YkwqjPUMb